पहिलो पटक सेतो काग देखियो! काग किन भयो कालो? यस्तो छ कारण – Sandesh Press
November 12, 2021 296
‘झुठ बोले कौवा का टे’ भनाई तपाइले सुन्नु भएको होला तर सेतो काग देख्नुभएको छ? काग सधैं कालो हुन्छ भन्ने तपाइले भन्नुहुनेछ तर आज हामी तपाईलाई एउटा यस्तो सेतो कागको बारेमा बताउनेछौँ, जसको बारेमा तपाईले कमै सुन्नु भएको होला । सामान्यतया हाम्रो वरपर पाइने कागहरू कालो हुन्छन् र तिनीहरूलाई अशुभ मानिन्छ तर सेतो कागलाई अशुभ मानिँदैन र भारत मध्यप्रदेशको दत्तवारामा यस्ता कागहरू देखिएका छन्। यसअघि सन् २०१७ मा पनि सतनामा सेतो काग देखिएका थिए ।
तर, पौराणिक मान्यता अनुसार काग सेतोबाट कालो हुने फरक कथा छ । मान्यता अनुसार धेरै पहिले एक ऋषिले सेतो कागलाई अमृत खोज्न पठाएर अमृतको जानकारी मात्र ल्याउन आदेश दिएका थिए । वर्षौंको मिहिनेतपछि सेतो कागले अमृत फेला पार्‍यो, तर यति मिहिनेतपछि उसलाई पनि अमृत पि उ न लालसा भयो । कागले अमृत पि ए र ऋषिलाई यसबारे जानकारी गरायो।
Prevमैले जीतु नेपाललाई धोका दिएको छैन : ‘फुलन्देकी आमा’
यिनै यूवा नेता हुन् ,जसले शुरु गरे निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा,सलाम नेता ज्यु! सम्मान स्वरूप सबैले १ सेयर गरौ!!